Ma Doonayo Inaan Maqlo Qisadaada Nacaladda | Martech Zone
Talaado, Agoosto 28, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga qaylada Ereyga cusub ee ku saabsan dhammaan warbaahinta bulshada iyo suuq-geynta waxyaabaha ku jira ayaa ah sheeko. Waxaan ku wadaagnay waxoogaa faahfaahin ah sheeko sheeko ka soo horjeedka hadalka shirkadaha iyo sheeko muuqaal ah… Aniguna waxaan ahay taageere sheekada. Iyada oo dhagaystayaasha saxda ah, ma jiraan wax ka fiican sheeko wanaagsan oo lagu xiro dhagaystayaashaada.
Laakiin hadda waxaan isticmaaleynaa story wax walba. Astaantu waa inay sheegtaa sheeko. Noocyadu waa inay sheegaan sheeko. Sawiradu waa inay sheegaan sheeko. Infographics-ku waa inuu sheegaa sheeko. Websaydhkaagu waa inuu kuu sheegaa sheeko. Qoraalkaaga balooggu waa inuu sheegaa sheeko. Soo jeedintu waa inay sheegtaa sheeko. Soo bandhigiddu waa inay sheegtaa sheeko.
Ku filan sheekooyinka nacaladda leh, horeyba! Sababtoo ah qaar ka mid ah guru meel laga hadlay sheeko macnaheedu maahan inay tahay istiraatiijiyad ku habboon deegaan kasta oo suuq geynaya iyo dhagaystayaal. Waxay i xasuusinaysaa muuqaalka Nolosha Brian… the Kabaha waa Calaamad!
Sida kabtu aysan calaamad uga ahayn Brian, sidoo kale sheeko-sheegiddu jawaab uma aha dhammaan dhibaatooyinka suuqgeyntaada. Waan ogahay dadka qaarkiis inay caabudaan guryadan suuq geynta ah… laakiin waxay taladooda ku qaataan iniin cusbo ah Iyagu ma yaqaaniin badeecadaada, warshadahaaga, qiimahaaga, faa iidooyinkaaga iyo faa'iido darrooyinkaaga, iyo si la yaab leh - ma yaqaanaan sheekooyinka macaamiishaada.
Mararka qaar, sheeko ma rabo - hore ayaan sheekada u maqlay.
Mararka qaarkood, ma rabo sheeko - waxaan rabaa inaan iska diiwaan geliyo khadka tooska ah.
Mararka qaar, ma rabo sheeko - ma haysto waqti aan ku dhageysto.
Mararka qaarkood, ma rabo sheeko - waxaan kaliya u baahanahay inaan arko astaamaha.
Mararka qaar, ma rabo sheeko - kaliya waxaan u baahanahay inaan ogaado faa'iidooyinka ay leedahay.
Mararka qaar, ma doonayo sheeko - Waan ogahay macaamiishaada oo waxaan rabaa isla badeecad.
Mararka qaarkood, ma doonayo sheeko - waxaan kaliya u baahanahay inaan arko demo.
Mararka qaarkood, ma rabo sheeko - waxaan kaliya u baahanahay inaan tijaabiyo.
Mararka qaar, ma rabo sheeko - kaliya waxaan u baahanahay inaan ogaado inta.
Mararka qaarkood, ma doonayo sheeko - kaliya waxaan u baahanahay inaan iibsado.
sheeko way adagtahay waxayna ubaahantahay karti dhab ah si loogu farsameeyo sawirka qoraalka, sawirada ama fiidiyowga si loo hubiyo fahamka. Waqtiga, codka, jilayaasha… dhamaan qaybaha waxay u baahan yihiin inay joogaan goobta si sheeko u shaqeyso oo runtii u taabato dhagaystayaasha kala duwan ee aad la hadlayso.
Dhowr bilood ka hor, waxaan sameeyay baaritaan ku saabsan shey u muuqday inuu hagaajinayo arrimaha aan ka qabno macmiilka. Waan ogaa inta macmiilku bixinayo. Waan ogaa inta dhibaatadu ku kacday iyaga. Waan ogaa inta aan diyaar u ahay inaan bixiyo si looga takhaluso arrinta. Boggu ma wada helin dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah, haddii kale waxaa laga yaabaa inaan saxeexay isla markaa iyo halkaas… laakiin waa inaan iska diiwaangeliyaa demo.
Ka dib markii aan saxiixay demo, waxaan helay wicitaan horay u-qalmitaan ah oo la igu weydiiyay su'aalo taxane ah. Su'aalo yar ka dib, waan ka cawday oo waxaan weydiistay demo. Waxay ahayd inaan dhammeeyo ka jawaabista su'aalaha. Markii aan dhammeeyey, waxaan qorsheeyay demo. Maalin ama wixii ka dambeeya, waxaan soo wacay demo, iibiyuhuna wuxuu furay sagxaddiisa caadada ah ee loogu talagalay qof oo bilaabay inuu u sheego story.
Waxaan ka codsaday inay joojiyaan. Wuu iska caabiyey.
Waxaan weydiiyay haddii aan sameyneyno demo, isna wuu dhinac maray su'aasha. Markaa waxaan ku idhi ha ii yeedho maareeyihiisu oo taleefanka waan iska dhigay. Hadda waan niyad jabay. Maamulihiisa ayaa wacay waxaan ka codsaday inuu si fudud u muujiyo softiweerka, anigoo sharxaya hadii qarashka uu kujiro miisaaniyadeyda iyo hadii softiweerku dhibaatada xaliyo, waxaan diyaar u ahay inaan iibsado
Wuxuu i tusay demo. Qiimaha ayuu ii sheegay. Waan iibsaday.
Dhamaadka wicitaanka, wuxuu qirtay inuu dib ugu laaban doono oo uu dib u habeyn ku sameyn doono nidaamka iibka si uu ula qabsado shirkadaha sida tayda oo kale ah.
In kasta oo aan ka mahadcelinayo dhammaan shaqooyinka cajiibka ah ee kooxdiisu ay tahay inay qabato si ay u falanqeeyaan xaaladaha guul / luminta, horumarinta shakhsiyaadka, u qoro sheekooyinka shakhsiyaadkaas, dejiso istiraatiijiyad u qalmidda oo ay igu quudiso sheeko igu kalifaysa inaan iibsashada sameeyo… I uma baahnin mana rabin midkoodna. Waqti uma aan helin sheeko. Kaliya waxaan u baahday xalka.
Ha u qaadan sidan hab qaldan, sheekooyinka waxay ku leeyihiin booskooda suuq geynta. Laakiin sheeko ma aha dawada xeeladaha suuqgeynta. Qaar ka mid ah dadka soo booqda bartaada ma raadinayaan sheeko… waxaana laga yaabaa inay xitaa niyad jabaan oo ay damiyaan. Sii fursado kale.
Runtii aad ujecel!
Hadda oo hadaladii dhamaaday, tani waa sheeko fiican oo habaar leh oo aad rabto inaad aqriso… saaxiibkay (iyo macmiilka), Muhammad Yasin iyo Ryan Brock bal fiiri taariikhda dheer ee dadka ee ka sheekeeyay sheekada saxda ah waqtiga saxda ah. Akhriso iyaga oo sahaminaya adduunka warbaahinta bulshada xilligii dhijitaalka oo aad fiiriso wixii la soo dhaafay si aad u barato in marka ay timaado farshaxanka sheekada, ay jiraan wax cusub ma jiraan qorraxda hoosteeda.
Soo qaado nuqul ka mid ah Wax Cusub Ma ahan: Taariikh Aan Xad Laheyn oo sheeko xariir ah iyo Baraha Bulshada.
Aug 28, 2012 at 11: 34 AM
Big big big weyn.
Sidoo kale inaad iga qosliso madaxayga dhamaadka.
Aug 29, 2012 at 11: 42 AM
Mahadsanid @ twitter-16882886: disqus!
Aug 29, 2012 at 3: 18 AM
Douglas, habka ugu wanaagsan ee lagu sharaxo qaddarinta maqaalkani waa sheeko yar. Mar baan ka hawlgalayay aaladda Twitter-ka waxaanan arkay cinwaankan yaabka leh, “Ma doonayo inaan maqlo sheekada nacaladda leh. Marka waan akhriyay maqaalka oo madaxa ayaan ka qoslay. Aniguna farxad baan ku noolaa waligay.
Aug 29, 2012 at 11: 41 AM
@AstroGremlin: disqus aad baa loo qiimeeyay! 🙂
Aug 29, 2012 at 4: 51 AM
Sheekooyinku waa fiican yihiin, haddana waxaan sidoo kale ku jirnaa adduunyo maqal iyo xaraf leh. Fursadaha wadooyin badan ayaa faa'iido leh. Qoraaladaydii ugu dambeysay ee blog-ka oo ay dhiirrigelisay kartoonnada Rupert Bear, oo leh sawir, gabay iyo tiraab, ayaa si fiican ula shaqeysay carruurtayda. Bogagga soo degida ee nuqul-dheer ah, tusaale ahaan, waxay ku fiican yihiin SEO iyo akhristayaasha qaarkood, laakiin fiidiyowga iyo hore 'iibso-hadda / tallaabada xigta' badhanka ayaa bixiya dariiqyo marin-wareejin ah.
Aug 29, 2012 at 11: 43 AM
@markstonham: disqus Weli waan jeclahay nuqul dheer… laakiin sida aad u sheegto, ikhtiyaarrada ayaa faa'iido leh. Mahadsanid!
Sep 1, 2012 at 5: 36 PM
Waa wax lala yaabo sida qof waliba ugu muuqdo inuu haysto sheekada sheekada.
Halkii sheeko laga sheegi lahaa, waxaa jira wax la dhihi doono oo loo adeegsanayo farsamooyinka sheeko-xariirka isgaarsiinta ganacsiga.
Haddii aad tan u gooyso xudunta, waxay ku saabsan tahay adeegsiga luqadda si aad u hesho mid ka mid ah dareenkiisa ama sida ugu fiican ee aad u soo jiidan karto. Sida iska cad, isgaarsiinta ku dhacda afar geesoodka caajiska ah waxay soo saaraan falcelin dhinaca kale ee muuqaalka.
Waxaan ku doodi lahaa in cinwaankaaga uu adeegsado farsamada sheeko-qorista ee ah inaad qaadato meel ka soo horjeedda.